Boqolal kun aya maanta mudaaharaad ka dhigay Itoobiya - Jowhar somali news leader
Boqolal kun aya maanta mudaaharaad ka dhigay Itoobiya
By hanad	 Last updated Nov 7, 2021
Boqola kun oo Itoobiyaan ah ayaa maanta oo Axad ah ka dhigay magaalada Addis Ababa mudaaharaad ay ku taageerayaan xukuumadda Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed, iyadoo ciidamada federaalku ay la dagaallamayaan xoogagga fallaagada ah ee ku hanjabay inay magaalada soo geli doonaan.
Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa dhaleeceeyay dowladda Mareykanka, oo ka mid ah quwadaha shisheeye ee ku baaqay xabbad-joojin muddo sannad ah oo ay ku dhinteen kumannaan qof, isla markaana ay sii kordheen horumarka fallaagada ee dhammaadka toddobaadka. u dambeeya
Mareykanka, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Midowga Afrika iyo Kenya iyo Uganda ayaa ku baaqay xabbad joojin maalmihii la soo dhaafay.
Xukuumadda Abiy ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto dagaalka. Jimcihii, dowladdu waxay sheegtay inay mas’uuliyad ka saaran tahay sugidda ammaanka dalka waxayna ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay taageeraan dimuqraadiyadda Itoobiya.
Qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay fagaaraha Meskel ee bartamaha magaalada Addis Ababa ayaa ku labisan calanka dalka. Qaar badan ayaa dhaleeceeyay Mareykanka.
Maamulka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Talaadadii ku eedeeyay Itoobiya “xadgudubyo ba’an” oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, waxayna sheegeen inay qorsheynayaan inay dalka ka saaraan heshiiska ganacsiga ee kobaca iyo fursadaha Afrika (AGOA).
“Shame on America,” mid ka mid ah boodhadhka dibad baxayaasha ayaa akhriyay, halka mid kalena uu yidhi America waa inay joojisaa “jaqista dhiigga Itoobiya.”
Dibad-baxayaal kale ayaa muujiyay sida ay uga careysan yihiin baaqa Mareykanka ee ah in dowladda iyo Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) ay bilaabaan wadahadal.
Colaada ka aloosan waqooyiga dalkaasi ayaa bilaabatay sanad ka hor markii ciidamada daacada u ah kooxda TPLF ay la wareegeen saldhigyo ciidan oo ku yaala gobolka Tigray. Abiy oo arrintaas ka jawaabaya ayaa ciidamo u diray, kuwaas oo markii hore kooxda TPLF ka saaray xarunta gobolka, balse isbedel xooggan ayaa la kulmay tan iyo bishii June ee sanadkan.
“Maxay dowladda Maraykanku ula xaajoon la’dahay argagixisada sida al-Shabaab?” ayuu yiri Tigist Lemma, oo 37-jir ah, isaga oo ula jeeday kooxda xagjirka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacidada Soomaaliya.
“Waxay rabaan inay dalkeena u burburiyaan sidii Afgaanistaan ​​oo kale. Waligood ma guuleysan doonaan, waxaan nahay Itoobiya.
Isagoo ka hadlayay isu soo baxa, duqa magaalada Addis Ababa Adanech Abiebe ayaa ku baaqay taariikhda Itoobiya ee ah in ay iska caabiso awoodda gumeysiga si ay u sababto dagaal.
Colaadda ayaa waxaa ku dhintay kumannaan qof, in ka badan 2 milyan oo qofna waxay ka qaxeen guryahoodii, 400,000 oo qof oo Tigray ahna waxay soo food saartay macaluul.
‘Dhalinyaro la’aan’ hortooda
Intii uu socday isu soo baxa ayaa waxaa ka soo yeeray fanaanka caanka ah ee Tariku Gankisi oo heesihiisa ku baaqaya midnimada dhamaan shacabka Itoobiya.
“Nin dhallinyaro ah yuusan u tagin dagaalka, odayaashu ha ka tagaan iyaga oo haysta cawska cusub oo ha weydiiyaan dib u heshiisiin,” Tariku ayaa u sheegay dadkii isugu soo baxay, ka hor intaanay makarafoonka damin, ma cadda cidda ay ka tirsan tahay. Cawska cusubi waa astaanta nabadda dalka.
Xaaladda degdegga ah ee ay dowladdu ku dhawaaqday Talaadadii ayaa u oggolaanaysa in ay amarto muwaadiniinta da’da milatariga ah si ay u qaataan tababar ayna qaataan waajibaadka milatari.
Wakaalada wararka ee Reuters uma aysan suurta galin in ay si madax banaan u xaqiijiso heerka uu gaarsiisan yahay horusocodka kooxda TPLF. Kooxda TPLF iyo xulafadeeda ayaa wakaalada wararka ee Reuters usheegay todobaadkii hore in ay caasimada ujiraan 325km. Dawladdu waxay ku eedaysay kooxdan inay buunbuuniyeen guulihii ay gaadheen.
Dowladda ayaa sidoo kale ka cabatay wararka colaada ay ka qoreen warbaahinta shisheeye iyadoo qaar ka mid ah dadkii ka qeyb galay banaanbaxa ay wateen boorar ay ku cambaareynayaan “war been abuur ah” oo ka jirta Itoobiya.
Billene Seyoum, oo ah afhayeenka Abiy, ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter ku sheegay habeenimadii Sabtida: “Dacaayadaha warbaahinta la abaabulay ee ka dhanka ah Itoobiya waa ay sii kordhayaan… Si kastaba ha ahaatee, Itoobiya way ka fiicnaan doontaa!”
hanad 6671 posts
Djokovic defeats Medvedev to claim sixth Paris Masters record title
Madaxweynaha Puntland oo isbedel ku sameeyay saraakiil ka tirsan ciidamada